Yintoni incwadi yomculi kwaye ingakunceda njani ukuba ungumdali | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UPablo Gondar | | Abadlali, ngokubanzi, Ukuphefumlelwa
Yintoni incwadi yomculi kwaye ingakunceda njani ukuba ungumdali kwaye wazise wonke loo msebenzi ufihliweyo oko akukaze kuboniswe kwihlabathi: iziketshi, izimvo, ubuchule bovavanyo kwaye yonke into onokucinga ngayo inokubanjwa kolu lwimi lwaziwayo njengencwadi yomculi. Kumzobi kubaluleke kakhulu kuyo yonke into Ukuzoba kunye neengcamango zokuqala ziyasebenza kuba iyakwazi ukubamba ubungakanani beprojekthi nganye Kungenxa yesi sizathu le fomati inexabiso elikhulu lokuba yinto eyahlukileyo eyahlukileyo.
Amagcisa amaninzi baziprintele ngokwabo iincwadi zabo zobugcisa kwisitayile esicocekileyo sokuzihlela ngokwakho, abanye bakhetha hlela ngokusebenzisa umshicileli kwaye uyikhuphe emhlabeni ngendlela enobungcali. Nokuba yeyiphi na indlela obonisa ngayo incwadi yakho yomculi kwihlabathi, kuyacetyiswa kakhulu ukuba uhlale ugcina zonke ezo ncwadi zobugcisa uzenzayo kuyo yonke imisebenzi yakho yobungcali.
Uninzi lwabazobi banakho ezindlwini zabo ezo ziqhelekileyo iincwadi zokubhala zigcwele imizobo kunye nemibono zazo zonke iintlobo malunga iiprojekthi zobuqu okanye zobungcali ukuba bafuna ukuzisa ekukhanyeni ngaxa lithile, kuqhelekile ukuba uninzi lwezo zimvo zihlala zilula kwaye aziphuhliswanga kwiiprojekthi ezilandelayo ngenxa yeso sizathu kubaluleke kakhulu gcina iincwadi zethu zemizobo. Kumntu ongaphandle kwe- Umsebenzi wethu unokuba nomtsalane kakhulu jonga incwadi yokubhala egcwele iingcamango, iziketshi ezikhawulezayo kunye namanqaku azo zonke iintlobo.
Incwadi yomculi ayinakuba yincwadi kodwa ibe naluphi na uhlobo lwenkxaso onokucinga ngayo oko kusivumela ukuba Qokelela wonke umsebenzi wethuNgokubanzi, iincwadi zokubhala zisetyenzisiwe kodwa zivulekile ngandlela ithile. Akukho mithetho, kuphela ukucinga kwethu.
Kule vidiyo sinokubona ulwazi malunga neencwadi zomculi.
Las Izibonelelo zokuba nencwadi yegcisa Zizo zilandelayo:
Siyaqokelela umsebenzi wethu
Sinamava ngaphandle koloyiko okanye imithetho
Yinto entle kakhulu indawo yokunyusa
Iyasivumela Sikhuthaze kwaye usihlangule izimvo ezindala
Singasebenzisa naluphi na uhlobo lobuchule kwincwadi yethu yomculi ukusuka kwioyile ukuya kufota, nantoni na efika engqondweni inokuphuhliswa kulo msebenzi wobuntu. Incwadi yethu inokuba umsebenzi wovavanyo lomntu ngamnye Uyenza phi iprojekthi ethile, umzekelo, uphuhlisa iprojekthi kwibhodi kwaye ubeka yonke imixholo yemizobo kunye nemibono kwincwadi enye yegcisa.
La ulingo yenye yeendawo ezinamandla kwincwadi yethu yomculi kuba isivumela ukuba siziqhelanise, senze izinto ezintsha kwaye sivelise bonke ubugcisa ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lolawulo lwangaphandle okanye uthintelo, kuba olu luhlobo olukhulu kwinqanaba lokuyila. Bamba incwadana engenanto kwaye uqalise ukumbetha zonke iintlobo zezinto ngokungathi wayengu i collage, Ukukrazula amaphepha, uncamathisele amaphepha ezinto ezahlukeneyo, sebenzisa zonke iintlobo zemibala kunye nantoni na onokucinga ngayo.
Ndiyabulela imidiya yokuncokola yamagcisa njengaye Twilley sinethamsanqa lokufumana konke uluhlu lwezalathiso zoyilo kuzo zonke iintlobo, kule meko ukufumana izimvo ngeencwadi zegcisa sinokufumana amawaka eembono ezinokusinceda Sikhuthaze kwaye sitsibe echibini Uyilo olupheleleyo.
Ukuba ungumculi ungathandabuzi kukugcina zonke ezo sketchbook kuba kwixa elizayo banokukunceda khuthaza umsebenzi wakho okanye nokuhlela nokuzisa ekukhanyeni. Indlela elungileyo yokukhuthaza olu hlobo inkxaso yoyilo Kungenxa yenethiwekhi yoluntu njenge Instagram esivumela ukuba senze ifayile ye- umxholo othe ngqo kwaye ukhawuleze Umsebenzi wethu njengabadali.
Iincwadi zamaGcisa kwiPinterest
Iincwadi zomculi kwi-Instagram
Yintoni iPinterest kunye nendlela yokuyisebenzisa?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Yintoni incwadi yomculi kwaye inokukunceda njani ukuba ungumdali
Iincwadi ezahlukeneyo zabathandi bobuchule bobuchule